Maitiro ekuita mukutarisana nesitoko musika kutya? | Ehupfumi Zvemari
Maitiro ekuita mukutarisana nesitoko musika kuvhunduka?
Mamiriro ezvinhu epasi rese emisika yemasheya anopfuura njodzi kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Iko kusagadzikana uye kusagadzikana kwemisika yemari ndiyo njodzi huru inogona kukanganisa iyo kukoshesa kuchengetedzwa izvo zvakanyorwa pavari. Izvo hazvigone kukanganwika kuti kutya kuri kubata akasiyana emari vamiririri kunogona kuve chiratidzo chine simba kwazvo pamusoro pezvingaitika mumisika yemari kubva ikozvino. Ingozi iyo vashandisi vanofanirwa kufunga pamberi pekuzadziswa kweiyi fungidziro pasina chakanaka.
Kudzikira muhupfumi hweUS ndechimwe chezvinhu zvinotyisa chikamu chikuru chevatengesi. Mupfungwa iyi, mamaneja emari eUS vakaita kukanzurwa kwe nzvimbo pfupi kune zvinogona kuitika mumazuva mashoma anotevera, mavhiki kana kunyangwe mwedzi. Chokwadi ichi chiri kukanganisa zvimwe zvinhu zvemari, sekuderera kwekutenga kwema bond. Chiratidzo nezve izvo zvinogona kuitika mumisika yemari uye kuti isu tichaedza kuongorora muchinyorwa chino nezve chimwe chezviitiko zvakaipisisa zvinogona kuitika mumusika wemasheya: musika wekutengesa unovhunduka.
Mune pfungwa iyi, the Federal Reserve Bank yeAtlanta (United States) yanga ichiburitsa munzvimbo dzichangoburwa mamiriro angangoitika ekuti mitengo yezvibereko inofungidzirwa gore ra2020 na2021. Nekuderera kunotevera muzvivigiro zvakanyorwa pamisika yemari. Hazvishamise kuti mashandiro eS & P 500 anga asina kunaka kubvira mukota yechitatu yegore rapfuura. Kunyangwe ichivandudza yakakosha rebound panguva yeiyi bearish maitiro.
1 Ko kana kutya kwemusika wekutengesa kukasvika?
2 Ongorora mazwi ekudyara
3 Vazhinji vatengesi vakagadzikana
4 Nenhevedzano yambiro
5 Ndezvipi zvakakosha zvakanyanya?
6 Gara mune zvemari
Ko kana kutya kwemusika wekutengesa kukasvika?
Chero zvazvingaitika, mashoma akakosha ekuongorora shanduko kubva kune tekinoroji yekutarisa yeIbex 35 iyo ichiri a nguva isingagumi, kunyangwe ichigara iri mukati mekudzika kwakadzika maitiro nekuumbwa kwekudzikira kwehukama hwepamusoro uye hwakadzika. Asi izvi hazvisi zvechokwadi zvishoma kuti vamwe vanoongorora zvakakosha pamusika vanga vachinyevera nezve mukana wekuti varimi vangangotya musika wemari chero nguva. Kunyanya, yakatorwa kubva kumatambudziko ari kuita muchikwereti cheimwe nyika nematunhu.
Kana izvi zvikaitika chaizvo, hapazovi nesarudzo asi kuve mune yakangwarira mikana yekuchengetedza yedu portfolio yekudyara. Kwete pasina, imari yako ndiyo iri panjodzi uye nekudaro hazvikurudzirwe kusiya zvese mumaoko e kuvandudza sezvazvakaitika kune vamwe vashoma nevepakati varimari kana maitiro aya zvishoma zvaidiwa navo zvave kugadzirwa. Kugadzirisa iri dambudziko rakakomba tiri kuzokupa iwe mamwe maitiro ehunhu kuti iwe uzive maitiro ekushingairira kukuru mune ano akasarudzika mamiriro,
Ongorora mazwi ekudyara
Pakutanga, zvichave zvinopfuura zvinodikanwa kuti iwe utsanangure nguva yekusingaperi iyo yaunotengesa yako mumusika wemasheya inotungamirwa: ipfupi, iri pakati kana yakareba. Nekuti zvinoenderana neshanduko iyi uchafanirwa kushandisa imwe kana imwe nzira ku chengetedza zvaunofarira semusimari. Nekuti kana kutora zvigaro kwaitwa kwenguva pfupi, zano rakanakisa raunogona kushandisa muchiitiko chekutya musika wekutengesa kugadzirisa zvigaro nekukurumidza sezvaunogona nekuti unogona kurasikirwa nemari yakawanda kupfuura yawakawana kusvika ipapo.
Zvinogara zvirinani kurasikirwa ne10% pane makumi mashanu muzana pane kukosha kwechitoko. Ichi chidzidzo chekudzidza kubva muzvikamu zvakapfuura zvekuderera kukuru muzvikwereti. Kunyanya kana chinangwa chako chakanangiswa kune iyo mapfupi mazuva ekupedzisira kuita kuti yako wega kana yemhuri pfuma ibatsire. Hapana chikonzero chaunofanira kunetseka pamusoro pekuita danho rakakura zvakadaro nekuti haufanire kuzvibvunza kuti chii chawakarasa, asi pane izvozvi unofanirwa kuongorora zvaunogona kurasikirwa kubva panguva ino. Ehezve, mune mamiriro emusika wemusika kutya kune zvakawanda uye kupfuura zvaunofungidzira pakutanga.
Vazhinji vatengesi vakagadzikana
Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo chinoreva zviito zvevashambadziri avo vakagadzikana munzvimbo dzavo muequity. Ndokunge, havadi zvekufungidzira mashandiro kwemazuva mashoma kana mavhiki, asi zvinangwa zvavo zvakagadzwa kubva pakati nepakati nepakati. Mune ino kesi, zano rako richasiyana zvakanyanya zvichibva pachinhu chakakosha ichi. Nekuti ichi chokwadi chinogona kuenda chisingaonekwe, tichivimba kuti sekufamba kwemakore mutengo wemari unodzoka. Nekuti pane chirevo pakati pevashambadziri vane ruzivo rwakanyanya mumisika yemari inoti "mumusika wemusika wenguva refu unokunda." Izvi hazviwanzo chokwadi, asi zvinosangana nezvimwe zvakajairika.
Kune rimwe divi, izvo zvisingamiriri zvinomiririra kuputsika kwemusika wemusika iri mukana chaiwo wekugadzira bhizinesi rinobatsira zvikuru. Iwe haugone kukanganwa kuti pakupera kwezuva iwe unogona tenga zvakachipa kwazvo masheya, nemutengo wekukwikwidza kwazvo wemusika semhedzisiro yeiyi yakakosha uye panguva imwechete yakanyanyisa. Nezvikwereti zvinogona kugadziriswa ne50% kana kunyangwe zvichienzaniswa nemitengo pamberi pemusika wekutengesa paniki mamiriro. Iko kwavanenge vaine mukana wepamusoro wekutarisa kupfuura pamberi penjodzi. Izvi zvinonyatso kuzivikanwa nemaoko akasimba emusika uye nekudaro ivo vanoziva maitiro ekuishandisa nemazvo chaizvo.
Chero zvazvingaitika, kudzivirira ndicho chombo chakanakisa chinowanikwa kune vashoma nevapakati varimari kuti vagadzirise mamiriro aya. Nyaya nguva dzose kuvhunduka kwemusika wemasheya kunouya kamwe kamwe uye hakubvumiri iwe kuti uite nehumwe kugona. Nekudaro, kune zvimwe zviratidzo zvinogona kuratidza kuti kufamba kwakasarudzika mumisika yemasheya kwave pedyo. Semuenzaniso, a kuchinja kwakanyanya muitiro uye kuti inoperekedzwa nevhoriyamu hombe yekutora. Iyo inogona kuve yakanyanya kana kushoma kutendeseka clue nezve izvo zvinogona kuitika mumwedzi mishoma inotevera.
Chimwe chiratidzo chekuona mamiriro aya mumisika yemari ndechekuti inotorwa kubva mukuvapo kwevamwe mari yekubwinya. Mupfungwa iyi, zvakakwana kurangarira zvakaitika kumakambani ezve tekinoroji muma90s ezana ramakore rapfuura. Kana mubhodhoro rimwechete rezvidhinha raive rimwe rematambudziko akakosha ekuonekwa kwedambudziko rehupfumi muna 2007 na2008 nemhedzisiro inozivikanwa nemunhu wese panguva ino. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha maonero.
Ndezvipi zvakakosha zvakanyanya?
Mumwe mubvunzo unofanirwa kubvunzwa mune ingangoitika mamiriro ekutengesa pamusika wekutengesa kuona masheya ari panjodzi yekutambura kuwira kukuru. Zvakanaka, mune idzi kesi hapana anosara uye ivo vese vanodzika pamusoro kwenguva yakareba yenguva. Nekudaro, kune mamwe makambani akanyorwa anoita zvakashata kupfuura mamwe mune aya masiteki-kuderera kwemaitiro maitiro. Semuenzaniso iyo zvikamu zvecyclical, zvemari, zvehunyanzvi uye zvakajairika izvo zvine hukama nekukura kwehupfumi hwenyika. Ivo, chokwadika, ndivo vanoratidzwa zvakanyanya kumhedzisiro yeanonzi sitoko musika kutya.
Kune rimwe divi, kune zvimwe zvikamu uye kuti kunyangwe ivo vachigamuchira kudzikira kwekukosha kwavo pamusika wemasheya, vanozviita vasina kusimba kudarika avo. Aya ndiwo anonzi machengetedzo uye mune dzimwe nguva anoita sekupotera kubva kune capital stock mumisika yemari. Ndiyo chaiyo nyaya ye makambani emagetsi uye mune dzimwe nguva izvo zvine chekuita nechikafu. Izvo hazvireve kuti zviito zvako zvichatenda mune ino mamiriro, asi chokwadi kuti ivo vanozoita zvirinani kupfuura vamwe vese.
Gara mune zvemari
Nzira chete yekubuda muhurongwa uhu usina kukuvara ndeyekuva mvura yakazara. Izvo zvakaoma kwazvo kuzviita, asi pamberi pekutanga kunokanganisa mafambiro iyi yakasarudzika nzira yekudyara inogona kugadziriswa. Sezvinei, bvisa zvinzvimbo mumisika yemari yekuzvichengeta muzvigadzirwa zvebhengi zvehupenyu hwese (nguva inochengeterwa, zvinyorwa zvepasirose yenyika kana maakaundi ane mari zhinji). Kune rimwe divi, zvinoshandira kudzoka kumisika yezvemari kana maitiro aya apedza, asi zvine mukana mukuru wekuti zvikamu zvemakambani akanyorwa zvinogona kutengwa pamutengo unokwikwidza kupfuura pakutanga.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kuyeukwa kuti mabhegi haadzike kana kusimuka nekusingaperi, sezvauchazoziva kubva pane chako chiitiko. Uye mushure menguva yesitoko musika kutya kunouya kupora kwavo, kunyangwe nehukuru hwakanyanya mukukwira. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira ino yakanaka nguva uye nzira yakanakisa yekuzviita kuve mune yemari uye chengetedza iyo kusevha mune yako yekutarisa account. Zvirinani iwe ucharara zvakanyanya zvirinani pamberi pechingaitika kwauri kwemwedzi yakawanda uye yakawanda, inova mushure mezvose zvazviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Maitiro ekuita mukutarisana nesitoko musika kuvhunduka?
Chartist manhamba: maitiro ekutengesa pamusika wemari?
Yese mainshuwarenzi aunogona kuhaya